Archive du 20180217
Kolikoly hidirana mpianatra ho mpitsara Mampiaka-peo ny CNIDH
Nambaran’ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fandaharana “Fotoam-bita” farany fa manimba firenena ny endrika kolikoly rehetra, ka iray amin’ireo tena mamotika ny ao amin'ny fitsarana.
Henry Rabary-Njaka “Efa mipetraka ny fototry ny fampandrosoana… ”
Tafiditra ao anatin`ny fampandrosoana ny lafiny ara-toekarena, ara-tsosialy ary koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny hifandraisany amin`ny diplomasia politika sy mitodika ara-toekarena, ny toeran`i Madagasikara eo amin`ny iraisam-pirenena. Fanontaniana manitikitika ny maro ireo ary nanasan`ny Gazety Tia Tanindrazana an`Atoa Rabary-Njaka Henry minisitry ny Raharaham-bahiny.
Mialy Rajoelina Miditra lalina amin’ny politika
Tsy misy ny kisendrasendra amin’ny politika fa tsy maintsy miasa ny paikady isan-karazany. Hita amin’ny zavatra ataony sy ny fihetsiny fa manomana ny fiverenany eo amin’ny tontolo politika i Andry Rajoelina, efa mazava ny amin’iny.
Miongotra ireo mpitondra be vinany aty Afrika Ho avy ny an-dRajao raha tsy manaja tena
Mitsoka ny rivo-panovana aty Afrika, ka miongotra tsikelikely amin’ny toerany ny mpitondra be vinany sy manaotao foana. Porofo mivaingana ny nahazo an’i Robert Mugabe filohan’i Zimbabwe teo aloha, izay voatery niala teo amin’ny fahefana ny 21 novambra 2017.
Herinaratra avy amin’ny herin’ny masoandro Vahaolana amin’ny fidangan’ny jiro
Efa manomboka maro ny liana sy manjifa ireny plaque solaire na herinaratra avy amin’ny masoandro ireny eto Madagasikara ary tsy saro-tadiavina fa hita eny amin’ny tsena rehetra eny.
Vondrona STAR Namoaka sary famantarana maneho ny fiainan’ny Malagasy
Namoaka sary famantarana vaovao ny vondrona Star. Sary famantarana miavaka tsy toy ny mahazatra hatramin’izay izy io amin’ny ankapobeny satria dia maneho ny fiainan’ny Malagasy amin’ny ankapobeny mihitsy.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Bertin Andriamiharinosy na i Tilty Nanan-danja eo amin’ny firenena iray ny fanatanjahantena
Sady kintan’ny baolina kitra no kintan’ny taranja hanball no efa mpanazatra handball nikoizana sady mpampianatra fanatanjahantena malaza no vahinin’ny kintan’ny fanatanjahantena Malagasy ato amin’ity pejin’ny Tia Tanindrazana ity anio sabotsy 17 febroary 2018 ka hiresaka betsaka ny lanjan’ny fanatanjahantena eo amin’ny fiainanan’ny firenena iray.
Foibe fanofanana nasionalin’ny baolina kitra Carion Mpanazatra tena avo lenta 27 no navoaka ofisialy omaly
Tsy mitsahatra ny mikaroka ny fanatsarana ny kalitaon’ny baolina kitra eto Madagasikara ankehitriny ny FMF tarihan’ny filohany, Doda Andriamiasasoa, ka nangataka tamin’ny FIFA indray ny hanatanterahana fampiofanana mpanazatra tena avo lenta eto Madagasikara.
Ririnin-dasa tsy tsaroana !
Sesilany ny seho ivelany amin’ny ambara fa vina hampisandratana an’i Madagasikara ataon’ireo heverina fa ho kandida filoha amin’izao fotoana.
Depiote Razafindravelo Hermann “Menatra amin`ny lalàna amin`ny faritra Atsinanana aho”
Nandritra ny taona 2009 ka hatramin`izao, 60% ny lalana any amin`ny Faritra Atsinanana dia tsy tafiarina avokoa.
Paosin-dra eny amin’ny hopitaly 100 ka hatramin’ny 150 isan’andro no ilaina eto an-drenivohitra
Manodidina ny 100 ka hatramin’ny 150 paosy isan’andro ankehitriny ny filana ra eto an-drenivohitra, raha araka ny fanadihadiana natao tetsy amin’ny Centre national de transfusion sanguine na ny CNTS etsy amin’ny HJRA Ampefiloha. Ireo vehivavy saro-piterahana na manana olana manokana no tena mandany izany amin’ny ankapobeny ankoatra ireo marary mafy mila fandidiana maika.
Hena amidy eny an-tsena Tokony handalo fanaraha-maso in-droa
Betsaka ireo hena lasa amidy eny amin’ny tany amin’izao sady eny amoron-dalana mihitsy. Voakasik’izany manokana ny eny Ampasika eny na ilay antsoin’ny olona hoe : bekoveta izay tena be mpividy tokoa.
Fanakalozana vola vahiny Manintona olona kokoa ny sehatra tsy ara-dalàna
Anisan’ny sehatra tsy ara-dalana miroborobo eto Antananarivo ny fanakalozana vola vahiny eny amin’ireny olona mijorojoro tahaka ny eny Analakely sy Antsahavola ireny.
Fampandrosoana an’i Madagasikara Sakana ny fomba fiasa
Anisan’ny mampahantra ny firenena Malagasy ny fomba fiasa sy fitantanana misy eto na eo amin’ny orinasa izany na eo amin’ny firenena. Tokony hanana drafitra maty paika ny mpitantana raha te ho lasa lavitra ary miainga amin’ny tompon’andraikitra voalohany na ny mpitarika izany.
Taom-baovao malagasy Miverina indray ny fifandroritana daty
Samy manampahaizana be daholo ve sa inona mihitsy no antony tsy mampifanaraka ireto mitonona ho mpandala ny fomban-drazana etsy sy eroa izay samy manana ny taombaovao malagasiny ireto ka tsy mety hahita daty iray azo hifanarahana hankalazana ity asaramanitra ity ?
Mitana ny hasin’ny tany rova Andriambahoaka Ny 17 sy ny 18 Martsa ho avy izao no taom-baovao Malagasy
Hankalazaina ny17 sy 18 martsa ho avy izao ny taom-baovao Malagasy taona 2018. Ny 17 martsa mantsy no maty ny volana, izany hoe mifarana ny taona. Tapitra ihany koa ny fotoam-pahavaratra, amin’ny ankapobeny, madio ny tany ary manomboka miditra anaty tsinam-bolana isika.
Fonja vaky sy gadra mitsoaka Hanomanana asa fanakorontanana ?
Sesilany ny fahavakisan’ny fonja sy ny fitsoahan’ny gadra teto Madagasikara nanomboka ny faramparan’ny taona 2017.
Fanafahana an’i Akil Cassam Chenai Nandoa 7 miliara ariary ny fianakaviany
Ny alakamisy tokony ho tamin’ny 10 ora alina teo no nalain’ny polisin’ny UIR tao Toamasina tao amin’ny Stadium Mangarano i Akil Cassam Chenai, taorian’ny famotsoran’ireo mpaka an-keriny azy tao amin’ity toerana ity raha avy niantso ny fianakaviany tamin’izao fahafahany izao.
Fifidianana tany Etazonia Rosiana 13 voaheloka noho ny fitsabatsabahana
Teratany Rosiana 13 miampy sampandaharaha Rosiana 3 no nomelohina manokana omaly fa niditra lalina sy nikasa hanova ny zotram-pifidianana sy ny voka-ppifidianana farany teo tany Etazonia, araka ny fanambarana ofisialy navoakan’ny ekipan’ny tonia mpampanoa lalàna manokana Robert Mueller.